Sharaabka Fudud ee Sonkortu ku Badan Tahay oo Kor u Qaada Khatarta Isku Buuqa. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: January 13, 2013, 1:12 pm
Daraasad cusub oo laga sameeyey saamaynta noocyada sharaabka fudud ee sonkortu ku badan tahay ku leeyihiin caafimaadka dadka oo ay soo saareen khubaro Maraykan ah, ayaa lagu iftiimiyey inay kor u qaadaan khatarta isku buuqa qofka la qabatima amma badsada isticmaalka sharaabyada fudud ee aadka u macaan.
Cilmi-baadhistan waxay khubaradu ku baadheen 265 kun qof oo isugu jira rag iyo dumar da?doodu u dhexayso 50 ilaa 71 jir oo dhammaantood aad u isticmaala cabbista sharaabka macaan.
Daraasaddan oo diyaarinteedu qaadatay muddo 10 sannadood ah, waxa dadka ka qaybgalay lagu weydiinayey inay shantii sanno ee la soo dhaafay ay la kulmeen wax isku buuq ah amma xaalad cidhiidhi nafsaani ah, waxana dadka maalintii ka cabba sharaabka macaan 4 koob ayÃƒâ€šÃ‚Â la kulmeen 30%isku buuq, marka loo eego kuwa aan iyagu isticmaalin sharaabka sonkorta.
Akadeemiyadda Neerfisyada ee Maraykanka oo qabatay shirweyne cilmi-baadhistan lagu soo bandhigay, ayaa lagaga digay in dadku xoog u isticmaalaan noocyada sharaabka macaanku aadka ugu yar yahay.
Daraasadayadu waa mid hordhac ah, lamana garanayo sababta macaanku cilmi ahaan arrintan u sababo. Dadku way yaraystaan dhibaatadiisa, balse aad bay u halis tahay, waxaanay caddaymaha aannu helnay soo jeedinayaan in arrintan laga taxadiro oo dadku yaraysaan cabbitaannada sonkortu ku badan tahay.? Sidaa waxa yidhi Mr. Hongelia Chen oo ka mid ah cilmi-badhayaasha daraasaddan soo saaray.
Waxa kaloo cilmi-baadhistu sheegtay in dadka afar koob oo kafee ah maalintii cabbaa in 10% isku buuqoodu ka yar yahay kuwan aan iyagu isticmaalinta kafeega.
Qamrooy Balaayo Kucabtay Dhacdo Rasmi Ah Daawo Video.